စကားပြော နောက်ကျသော ကလေးများ အတွက် သုံးသပ် သင့်သော အချက်များ။ – Burmese Baby
စကားပြော နောက်ကျသော ကလေးများ အတွက် သုံးသပ် သင့်သော အချက်များ။
Web Master | May 4, 2017 | Articles, Lifestyle | Comments
? ကလေးက ၂ နှစ်ကျော်ပြီ မေမေ ပဲခေါ်သေးတယ်။ တခြားဆက်မပြောတတ်သေးဘူး။
? ကလေးက ၁ နှစ်ခွဲရှိပြီ စကားတစ်လုံးစ နှစ်လုံးစပဲပြောသေးတယ်။
? ကလေးက ၃ နှစ်ကျော်ပြီ စကားတစ်လုံးမှ မပြောဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
? ကလေးက မေးရင်မဖြေဘူး။ စကားသိပ်မပြောဘူး။ တခြားကလေးတွေနဲ့ သိပ်မဆော့တတ်ဘူး။
? ကလေးစကားမပြောလို့ မူကြိုထားလိုက်တယ်။
? ကလေးစကားမပြောဘူး။ ကြက်ဖင်ဆီဖူးကျွေးရမယ်ပြောတယ်။ ကျွေးတာပဲ မပြောဘူး။
? ကလေး စကားမပြောလို့ ဗေဒင်ဆရာ သွားမေးတာ ငါးအကောင် တစ်ရာ လွှတ်ရမယ်ပြောလို့ လုပ်ပြီးပြီး ပြောပြီလားလို့ စောင့်နေတယ်။
? ကလေး စကား မပြောလို့ သိုက်ကလာတယ်ပြောတယ်။ အမှားလုပ်ထားလို့ တဲ့ ။ဘိုးတော်ကို ၅၀၀၀၀တန် ပွဲပေးရမယ်။
? ကလေး စကားမပြောတာ ဗေဒင် ဆရာက ပြောတယ်။ မူးမြစ်ရေကို တိုက်ရမယ်တဲ့ ။
? ကလေး က မျိုးရိုးလိုက်တာ။ သူအချိန်တန်ရင် သူ့ဖာသာပြောလိမ့်မယ်။စောင့်ကြည့်။
အထက်က စကားတွေကို ဖေဖေ မေမေတို့ ကြားဖူးသလိုရှိပါသလား? ကိုယ်တိုင်ကော တွေးဖူး၊လုပ်ဖူး ပါသလား?။
ကလေးစကားပြောအောင် ကြက်ဖင်ဆီဖူး ကျွေးချင်ကျွေးလို့ရပါတယ်။ ကြက်ဖင်ဆီကနေ ကလေးက အသားဓါတ်နဲ့ အဆီဓါတ်တော့ ရမှာပါ။ စကားပြောဖို့ ဦးနှောက်ကို ဘာမှ အထောက်အကူ မပြုနိုင်ပါဘူး။
ယတြာခြေတာနဲ့ ပွဲပေးတာတွေက မိမိတို့ရဲ့ ယုံကြည်ရာမို့ သေချာမပြောတတ်ပေမယ့် စကားပြောတယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တာမို့ ကလေးတို့ စကားပြောလာဖို့ လေ့ကျင့်ပေးမယ့်နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှသာ ကလေးဟာ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကိုသာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဘာသာစကားဆိုတာ ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်သက်သက်ပါ။ ဘာသာစကားတစ်ခုကို တတ်မြောက်ဖို့ အမြင်၊အကြား၊ အပြုအမူတွေကနေ သင်ယူရတာပါ။ ဒါတွေကို အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အာရုံကြောအစိတ်အပိုင်းလေးတွေ အလုပ်လုပ်အောင် ၊ ကူညီသင်ကြားနိုးဆွပေးရမှာပါ။
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ၂ နှစ် ၃ နှစ်ကျော် လာလို့ စကားမပြောသေးရင် တစ်ခုခု လိုအပ်ချက်ရှိနေလို့ပါ။ ကလေးဟာ မျိုးရိုးလိုက်လို့ စကားပြောနည်းရင် သူသိပ်စကားမပြောဘဲ စကားပြောနည်းတာပဲ ရှိပါမယ်။ သူလိုအပ်လို့ ပြောရမယ့် စကားကို ပြောတတ်ရပါမယ် ပြောတတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားမပြောသေးရင် စောင့်မနေဘဲ သူဘာလိုအပ်လဲလို့ သိအောင် လုပ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးသင့်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ပြသတိုင်ပင်ပါလို့ ဆိုကြတာပါ။ နည်းလမ်းတွေ ရလာပြီး ကလေးနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဘဝလည်း အဆင်ပြေလာမှာပါ။
ကလေးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်တဲ့ နား၊ မျက်စိ၊ခံတွင်းစတာတွေ ပုံမှန် ကောင်းမွန်တယ်။ အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ ( autism, speech delay, ADHD)အထွေအထူးမရှိဘူး ဆိုရင် ကလေးရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ကို ပြန်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
⁉️ကလေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ကလေးကို ဘယ်လိုဆက်ဆံနေကြပါလဲ။
⁉️ကလေးဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘယ်လို activity ရှိပါသလဲ။
⁉️ဘာသာစကား တစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ကလေးက ကြားနေရတာလား။
⁉️ကလေးရဲ့ fine motor skill( လက်ချောင်းကလေးတွေရဲ့ အနုစိတ် တိုးတက်မှု) gross motor skill( ခြေလက်တွေရဲ့ သန်မာတိုးတက်မှု) တွေ အားလုံး အဆင့်အလိုက် ကိုက်ညီပါလား။
⁉️ကလေးဟာ အစားအစာကို သေချာ ဝါးစားတတ်တာ၊ဆပ်ပြာ ပူဖောင်း မှုတ်တတ်တာ၊ ပါးစပ် အနေအထားအမျိုးမျိုးနဲ့ အသံများ ပြုလုပ်တတ်တာ စတဲ့ အပြုအမူများ ပြုလုပ်ပြီး ခံတွင်းရှိ ကြွက်သားများ သန်မာမှု ရှိပါသလား။
ဒါတွေကို မိဘများ သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ ၂ နှစ်ခွဲ ၃-နှစ် ဖြစ်လာလို့ ကလေးဟာ စကား ကောင်းကောင်းမပြောသေးဘဲ နောက်ကျနေပြီဆိုရင် သူစကားပြောလာအောင် သူ့ဦးနှောက်ကို stimulateလုပ် နိုးဆွရမှာပါ။ သင်ကြားပေးရမှာပါ။ အလိုလို ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းကိုက်ရင် ခေါင်းကိုက် ပျောက်ဆေးသောက်ရသလို၊ သောက်လိုက်ရင် သက်သာသွားသလို စကားမပြောရင် ပြောလာအောင် နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ( မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့) ကလေးကို ကူညီပေးရင် သင်ကြားပေးရင် သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးဟာ အိမ်မှာနေတဲ့ အချိန်တော်တော်များများမှာ အမေ(သို့) ကလေးပြုစုသူနဲ့ပဲ နေရတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း စကားနည်းတယ်။ ကလေးကို ထမင်းကျွေး သန့်ရှင်းလုပ်ပေးတာလောက်ပဲရှိပြီး ကလေးကို တစ်ယောက်ထဲလွှတ်ထားမယ်၊ အတူတူဆော့ကစားပေးတာ ပုံပြင်ဖတ်ပြတာ၊ အချိန်ပေးပြီး အပြန်အလှန် ဆက်ဆံစကားပြောတာ နည်းတယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ အကြားအာရုံကနေတစ်ဆင့် သင်ယူရမယ့် စကားလုံးတွေနည်းနေတာကြောင့် စကားလုံးတွေ မတိုးတက်ဘဲ မပြောတတ်တာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို တီဗီ၊ဖုန်း၊တပ်ဗလက်တွေပေးထားတယ်၊ကလေးဟာ nursery songs တွေ၊ကာတွန်းတွေကြည့်ပြီး နေတဲ့ အချိန်တွေ အရမ်းများနေပြီး သီချင်းလေးတွေတော့ အရမ်းတတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူလူချင်း ဆက်ဆံပြောဆိုဖို့ရာမှာ စကားပြောဖို့ရခက်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကလေးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး စကားပြောပေး၊ကစားပေး၊ နားထောင်ပေးမယ့် အချိန်ထက် တီဗီ ကြည့်နေတဲ့ အချိန်က များနေတော့ ကလေးက လူတွေ အချင်းချင်းဆက်ဆံပြောတာ ဘယ်လိုမှန်းမသိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်နှာအမူအယာ၊ အသံနေအသံထား၊အတူနေသူ ပြောနေသူရဲ့ ခံစားချက်တွေကနေတဆင့် ကလေးဟာ လူလူချင်း ဆက်ဆံပြောဆိုတာတွေကို သင်ယူတာမို့ TV ကသင်တာနဲ့ လူလူချင်း သင်တာဟာ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး။
ကလေးဟာ မုန့်၊ ရေ၊ကစားစရာ၊ စာအုပ်စတာတွေကို တောင်းဆိုစရာမလို အရာရာ မိဘက အရမ်းလိုက်လုပ်ပေးနေတာမျိုးဆိုလည်း ကလေးရဲ့စူးစမ်းသင်ယူစိတ်ကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ သူဘာလိုချင်လဲ၊ သူဘယ်လို တောင်းဆိုရမလဲ ဆိုတာမျိုးကို သင်ယူခွင့် နည်းနေတာမို့ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်က ဒါကို လုပ်ရကောင်းမှန်း မမှတ်သားထားတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးကို ကစားစရာ ပေးတော့မယ်ဆိုရင်တောင်” သမီးက ရုပ်ရုပ် လိုချင်တာလား? ပေးပါ… ပေးပါ” အဲလိုလေး တောင်းတတ်အောင် သင်ကြားပြီးမှ ပေးသင့်ပါတယ်။#နီတိုးလေးမေမေ
သာသာစကားတစ်မျိုးထက်ပိုကြားနေရတဲ့ ကလေးတွေဟာလည်း စကားပြောနှေးနိုင်ပါတယ်။ရောပြီး ပြောကြတယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ကလေးကြည့်နေတဲ့ ကာတွန်း၊ nursery songs တွေက number songs တွေက အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပြီး အိမ်က လူကြီးတွေက ဗမာလိုပြောနေကြတော့ ကလေးက ဇဝေဇဝါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာကိုပြောရမှန်းမသိပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် ကလေးဆိုရင်တော့ နောက်ကျပေမယ့် သူ ရှင်းလင်းပြီးသိသွားတဲ့အခါ နှစ်မျိုးစလုံး ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောလာတာလည်း ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့ ကလေးတွေက အမြင်အာရုံ ( visual learning) နဲ့ သင်ယူတတ်ပြီးတစ်ချို့က အကြားအာရုံ ( auditory learning)နဲ့ သင်ယူပါတယ်။ ဥပမာ – စာအုပ်လို့ သင်ပေးရင် visual learner က စာအုပ်ဆိုပြီး ကိုင်ပြ၊ပုံပြ မှ ပိုမှတ်မိပါတယ်။ သားပြေးလာလို့ ပြောရင် ပြေးဆိုတာကို ကလေးသိအောင်၊ လုပ်တတ်အောင်၊လိုက်ပြောအောင် အမူအယာနဲ့ ပြတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အကြောင်းအရာများဆိုရင် ပုံဆွဲပြပြီး ပြောပြတာက ကလေးတို့ ပိုပြီး နားလည်လွယ်တတ်ပါသေးတယ်။
⭐️ ⭐️ ⭐️ကလေးစကားမပြောသေးလို့ မူကြိုသွားထားလိုက်တယ် ဆိုရာမှာလည်း မူကြိုက ကလေးရဲ့ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ဆက်ဆံသင်ကြားပေးရင်တော့ ကလေးအတွက် အကျိုးရှိပြီး ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကလေးတွေအတူ စာသင်၊ စာရေးခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့ စကားမပြောသေးတဲ့ ကလေးအတွက် ခက်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၃ နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေး၊ အိမ်ကလူတွေနဲ့တောင် စကားပြောဆက်ဆံရေးလုပ်ဖို့ ခက်နေသေးတဲ့ ကလေး၊ သူစကားမပြောသေးတော့ သူနားလည်နိုင်စွမ်း ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ၊ သူဘာလိုအပ်နေလဲသေချာ မပြောပြတတ်သေးတဲ့ကလေးကို ကစားဖော်ရှိတာကလွဲလို့ သူ့အတွက် အစိမ်းသက်သက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားထားလိုက်တာဟာ အရမ်းရက်စက်ရာကျတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကလေးလေးတွေအတွက် အိမ်ဟာ သူတို့ မွေးထဲကနေလာတဲ့ လုံခြုံတဲ့ရင်းနှီးတဲ့နေရာပါ။ ကျောင်းထားတာကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်ကလေးက ကျောင်းသွားနိုင်မယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် စကားမပြောသေးဘူး ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကလေးရဲ့ အခြေအနေကို သေချာကြည့်ပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်း သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅
ကလေးငယ်ကို ဘာသာစကား (၂)မျိုး သင်ပေးချင်တဲ့ မိဘတွေအတွက်
Comments | Mar 12, 2018
ကလေးတွေ အသီးအရွက်စားအောင်ကျွေးရမယ့် အချက်(၃)ချက်
Comments | Jan 1, 2018
Comments | Jan 9, 2017
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းများ၏ ရေဒီရေးရှင်း(radiation) အန္တရာယ်
Comments | Mar 13, 2018